Simbi Welding - Qingdao TianHua Yihe Foundry Factory
Qingdao TianHua welding inokwanisa kupa inorema simbi yekugadzira zvigadziriso izvo zvese zviri zviviri kugadzirwa uye zvinoshanda zvakanyanya. Isu tichakushandira iwe kuti uone iyo yakakwana mhando yesimbi yekugadzira purojekiti yako. Maitiro anoshandiswa kugadzira simbi yekugadzira anogona kuchinja mutengo. Simbi chinhu chakanakisa, chinobatika zvakanyanya, asi chinoshanda zvakanyanya mumaoko emainjiniya ane ruzivo anonzwisisa zvimiro zvayo uye zvingangobatsira.
Qingdao TianHua vane ISO 9001 & ISO 3834-2 vane zvitupa, uye vanogadzira welding vanodzidziswa uye EN ISO 9606-1 vane zvitupa. Tsika yekugadzira simbi inoda kushandisa iyo chaiyo mhando yewelding kuve nechokwadi chesimbi chimiro kutendeseka. MIG, TIG, Oxy-Acetylene, light-gauge arc welding, uye mamwe akawanda mafomati ewelding anowanikwa kurumbidza iwo chaiwo marudzi emasimbi uye ukobvu hunozodiwa nemutengi kugadzira michina inodiwa nevatengi.
Welding uye Machining yakatsaurirwa kuenderera mberi maitiro ekuvandudza ine mumba CWI. Vagadziri vedu vanogona kusangana nemhando yepamusoro-soro yekusangana nematambudziko anozokupa iwe basa remhando yepamusoro nguva dzose. Isu tinoenderera mberi nekutenga michina mitsva yekugadzira welding kuti ive yakanakisa tsika yekugadzira shopu yatingave.
Simba reSVEI Industrial Welding